Holy Bible Aionian Edition® ~ Myanmar---Myanmar-Burmese-Judson ~ 1-Samuel 10:16
၁ ဓမ္မရာဇဝင် 10:16
16 မြည်းတို့ကို တွေ့ပြီဟု ရှမွေလသည် အတပ်ပြောကြောင်းကိုသာ ရှောလုသည် ဘထွေးအာ ပြန်ပြော ၍၊ ရှမွေလပြောသော နိုင်ငံအမှုအရေးကို ဘထွေးအား မကြားမပြောဘဲနေ၏။
kingship, royalty, kingly office
something ruled, i.e.arealm; kingsom, king's, [idiom] royal.; feminine passive participle of h4427 (מָלַךְ);